I-Gretchen Carlson Iifayile zeSexual Harassment Suit ngokuchasene neRoger Ailes - Ezintsha
Eyona Ezintsha I-Gretchen Carlson Iifayile zeSexual Harassment Suit ngokuchasene neRoger Ailes
I-Gretchen Carlson Iifayile zeSexual Harassment Suit ngokuchasene neRoger Ailes
Ngokwetyala elifakwe namhlanje, u-Gretchen Carlson wayexhatshazwa ngokwesini ngumphathi wakhe u-Roger Ailes.(Ifoto: Wikimedia Commons)
Iankile yeFox News Channel uGretchen Carlson, owayebambe umboniso wamva kwemini Ibali lokwenyani noGretchen Carlson Kwaye ibingumbambisene naye Fox kunye nabahlobo Uye wafaka isimangalo kwi-Fox News CEO u-Roger Ailes, etyholwa ngokuhlukunyezwa ngokwesondo kunye nokupheliswa okungalunganga.
Isuti , efayilini yinkampani yamagqwetha uSmith Mullin P.C. kwiNkundla ePhakamileyo yaseNew Jersey, kutyhilwe ukuba isivumelwano sikaCarlson seFox News siphelisiwe ngoJuni 23.
Ndizamile ukuxhobisa abantu basetyhini kunye namantombazana kuwo wonke umsebenzi wam, utshilo uCarlson kwingxelo. Nangona eli yayilinyathelo elinzima ukulithatha, kuye kwafuneka ndizimele ndize ndithethele bonke abantu basetyhini kunye nesizukulwana esilandelayo sabasetyhini emsebenzini.
I-Ailes ityholwa ngokuqhubela phambili ngokwesondo ku-Carlson, othe ngaphandle kokuba yintatheli wathweswa isithsaba sokuba ngu-Miss America ngo-1989 kwaye ekwangumbonisi we-konsathi-waxelelwa ukuba wayemxelele ngexesha lentlanganiso yabucala ngo-Septemba ophelileyo, mna nawe kwixesha elidlulileyo.
Ngokwesi sikhalazo, uninzi lwala magqabantshintshi lwenziwa esidlangalaleni-kuthiwa u-Ailes uxelele abasebenzi abaliqela ukuba ulele nabantu abathathu ababesakuba ngu-Miss Americas kodwa hayi u-Carlson, kwaye xa wayesiya kumbulisa kumsitho, kuthiwa uxelele oogxa bakhe abahlala etafileni ahlala ehleli phantsi xa umntu obhinqileyo esiza kumhlangabeza ngoko ke kufuneka agobe ukuze abulise.
Esi ayisosihlandlo sokuqala uCarlson etyhola abo asebenza nabo kwiFox ngokuhlukumeza-ngo-2013, wathi yena Fox kunye nabahlobo Ukubambisana naye uSteve Doocy wenqabile ukumamkela kwaye amphathe njengentatheli ekrelekrele nenengqiqo yabasetyhini kunokuba abe ngumfazi oxhasayo. Isimangalo sityhila ukuba, u-Ailes wamgxotha kwinkqubo kwaye wamhambisa kwixesha lasemva kwemini, enciphisa imbuyekezo yakhe ngaxeshanye.
Ubungqina buza kubonisa ukuba u-Ailes ubulele ngabom umsebenzi wentatheli okhutheleyo, osebenza nzima kunye nomsebenzi othembekileyo weFox News, uMartin Hyman, iqabane lenkampani yaseNew York iGolenbock Eiseman Assor Bell kunye nePaskoe LLP kunye nomcebisi ka-Carlson, utshilo. ingxelo. Ukuchasana nokwabelana ngesondo kunye nokwala ukuza ngokwesondo okungafunekiyo akufuneki kuhlawulise umfazi umsebenzi wakhe okanye kumenze ajongelwe phantsi kunye nokukhathazeka ngokweemvakalelo.
UCarlson ufuna imbuyekezo eyimbuyekezo, umonakalo owohlwayayo kunye nokonzakala kwengqondo, kunye nemirhumo yamagqwetha kunye nokubuyiselwa kweerhafu-imali ethile yedola ayichazwanga.
I-Ailes iyazikhaba ngaw 'omane izityholo kwingxelo eya kuMqwalaseli.
Izityholo zikaGretchen Carlson zibubuxoki, utshilo. Esi sisimangalo sokuziphindezela kwisigqibo somnatha sokungasihlaziyi isivumelwano sakhe, nto leyo ibangelwa yinto yokuba amanqaku akhe aphantsi adanisayo ayerhuqa umgca wasemva kwemini. Xa iindaba zeFox News zingaqalanga naziphi na iingxoxo zokuvuselela ikhontrakthi yakhe, uNks. Okumangalisayo kukuba, iindaba ze-FOX zimnike amathuba angaphezulu emoyeni ngaphezulu kweminyaka eli-11 yokuhlala kunaye nawuphi na umqeshi kwishishini, athe wandibulela ngayo kwincwadi yakhe yamva nje. Esi simangalo sonyelisayo asikokucaphukisa nje kuphela, asikho mfuneko kwaye siya kukhuselwa ngamandla.
Utywala obulwelo: Eyona Band ibaluleke kakhulu ye-NY Ongazange Wayiva
'I-Big Crazy Family Adventure' Iinkwenkwezi Xoxa ngeehambo zabo ezili-13,000
Yima, ngaba iSigcawu-sendoda singumJuda 'Kwivesi yesigcawu'?
mangaphi amazwekazi akhoyo ngenene
Indawo efanelekileyo yokubamba i-intanethi
enkosi ngomculo mamma mia
U-dnc uphikisa enkundleni: asikutyali namnye umntu inkqubo ephambili efanelekileyo